Ityoophiyaa fi Briitaaniyaan waliigaltee deeggarsa Birrii biiliyoona 6.3 mallatteessan – Fana Broadcasting Corporate
Ityoophiyaa fi Briitaaniyaan waliigaltee deeggarsa Birrii biiliyoona 6.3 mallatteessan
Finfinnee, Fulbaana 25,2011(FBC) – Ityoophiyaa fi Briitaaniyaan waliigaltee deeggarsa Birrii biiliyoona 6.3 walii mallatteessan.
Waliigalticha karaa Ityoophiyaatin ministir deettan Ministeera Walta’umsa Maallaqaa fi Diinagdee obbo Admaasuu Nabbabaa, karaa Briitaaniyaatin ammoo ministir deettan dhimma Afrikaa Haareet Baaldwiin mallatteessaniiru.
Deeggarsichi qulqullina barnoota Ityoophiyaa fooyyessuu, invastimantii Ityoophiyaatif haala mijeessudhaaf oola.
Maallaqni deeggarsa barnootatiif laatamu carraa barnootaa lammiilee dhabaniif; daa’imman qaamaa miidhaman, barnoota sadarkaa 1ffaan duraaf, sadarkaa 1ffaaf, sadarkaa 2ffaaf keessumaa naannoo Afaar, Beenishaanguul Guumzii fi Afaaritti waliin ga’uuf oola.
Deeggarsi biroommoo invastimantii babal’isuu, damichaaf haala mijeessuu, oomisha alergii fi maanufaakchariingii jajjabeessuuf oola jedhameera.
Finfinneen invastimantii hooteela magaalichaa guddisuuf murteessite
Karoorri sirni faaynaansii Ityoophiyaa ittiin hogganamu qophaa’aa jira
Mootummaan babbal’achaa kan dhufe qaala’insa jireenyaaf sababa kan ta’e gocha…
Finfinneen bara baajataa 2011tti galii Birrii biiliyoona 32 ol sassaabde